ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 1/1/10 - 2/1/10
ဒီဇင်ဘာလ မြူနှင်းတို့ သိုင်းခြုံလွှမ်းတဲ့ နံနက်ခင်းမှာ တည်ငြိမ်နေတဲ့ သူမကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျွန်တော်အ၇မ်း ၀မ်းသာမိတယ်။ ပုပ္ပါးဒဂုံအဝေးပြေးဘတ်စ်ကား ပြတင်းမှန်မှ ၀ိုးတ၀ါးနဲ့ မီးရောင်အောက်က သူမကို မသဲမကွဲ တွေ့ရတယ်။ အလွမ်းတွေ ရင်ခွင်ပိုက်လို့ သူမရှိရာ အပြေးပြန်ခဲ့တာ အခုသူမရင်ခွင်မှာ နားခိုရတော့မယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ စီးနှင်းလာသော အဝေးပြေး ဘတ်စ်ကားကြီးပေါ်မှ ပေတရာလမ်းမပေါ် ခြေချလိုက်၏။ ထိုအခိုက် အေးမြသည့်ဆောင်းလေက သူမရဲ့မူပိုင် ကိုယ်သင်းရနံ တွေကို ယူဆောင်လာတယ်။ သူမနဲ့ဝေးခဲ့ တာ ကြာပေမယ့် သူမကဟန်မပျက်။ အရင်အတိုင်း လေပြေလို ငြင်သာတဲ့ လက်တို့နဲ့ ထွေးပွေ့ ကြိုဆိုတယ်။
ပေတရာပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်း လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်လို့ လေနုအေးနဲ့အတူပါလာတဲ့ သူမရဲ့ရနံကို အားပါး တရ ရှူရှိုက် နေမိတယ်။ တကိုယ်လုံး ပြန်နှံ့သွားတဲ့ သူမရဲ့လေပြေ ရနံ့က ရင်ထဲမှာအေးမြလို့ လူကို လန်းဆန်း သွားစေတယ်။ ရှေ့နောက်ဘယ်ညာကို တစ်ချက်ဝေ့ကြည့်မိတော့ အချို့က မြူနှင်းကြားမှာ ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက် လို့ ဝေးကွာမှုအလွမ်းနေ့ရက် တွေကို ချေဖျက်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သူ့မရဲ့ လေပြေအထိ အတွေ့လေးတွေနဲ့ အလွမ်းနေ့ရက်များ ကြေပျက်တယ်။ တကယ့်ကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး မပြောင်းလဲသော သူမဘ၀ကိုကြည့်ရင်း အ၇မ်းကြည်နူးမိပါတယ်။ ခဏကြာတော့ ကားပေါ်က ဆင်းလာတဲ့လူတွေ ခရီး ကိုယ်စီဆက်လို့ လူစုကွဲသွားတယ်။ နေရောင်ချည် မမြင်ရသေး။ စိတ်ထဲမှာ ဆောင်းနှင်းဝေတဲ့ ဒီအချိန် လေးကို ကုန်ဆုံးသွားမှာ နှမြောနေမိတယ်။
ခရီးဆောင်အိပ်ကို ကျောမှာပိုးလိုက်တယ်။ အနွေးထည်ခေါင်းစွပ်ကို မတင်လို့ ၀င်းဝင်းစီနီမာရှေ့ လမ်းမကြီး အတိုင်း လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ ဝေးကွာလှတဲ့ ဓာတ်တိုင်မီးတွေက သူမရဲ့ မြနှင်းဝေတဲ့ မှုန်ရီဝိုးဝါး ဆောင်း နံနက်ခင်းကို ပိုမိုအသက်ဝင် စေ တယ်။ မြူမှုန်ကြဲတဲ့ အလင်းရောင်အောက်က မြင်းလှည်းဆရာရဲ့ လှည်းဘီး ကြား နှင်တံထိုးတဲ့ အချက်ပြသံကို ကြားရတယ်။ တိတ်ဆိတ်တဲ့ နံနက်ခင်းမှာ အေးမြတဲ့လေကို ရင်နဲ့တိုးလို့ လမ်းလျှောက်နေဆဲ မြင်းလှည်းဆရာမှ “ ဗျိုး. ဆရာလေး မြင်း လှည်း ငှားပါလား ” လို့ လှမ်းမေးတယ်။ “ဟင်..ဆရာလေးတဲ့... ဘယ်လိုခေါ်လိုက်ပါလိမ့်” မြင်းလှည်းဆရာ ဦးလေးကြီးကို ကြည့်မိတော့ ခပ်တည် တည်ရယ်။ “မငှားတော့ဘူးဦးလေ လမ်းလျှောက်ချင်လို့” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်စကား မဆုံးခင်မှာပဲ မြင်းခွာသံ နဲ့ လှည်းဘီးကြား နှင်တံထိုးလို့ အချက်ပြသံတို့ တစ်ဖြေးဖြေး ဝေးသွားတယ်။
သူမရဲ့ နံနက်ခင်းအချိန်မှာ လင်းကြက်တွန်သံ သဲ့သဲ့လေးကိုလဲ ကြားရတယ်။ အေးချမ်းသာယာခြင်းနဲ့ အရာ အားလုံးကို လွှမ်း ခြုံပေးထားတယ်။ သူမရဲ့လမ်းတွေက အချို့လမ်းမှာ ပလက်ဖောင်း မရှိဘူး။ ဒီလမ်းတွေကို လျှောက်နေကြ ခြေမျက်စေ့က အလွတ်ရတယ်။ မိုးကာလ ရေတိုက်စား သယ်ယူလာတဲ့ ပေတရာဘေးက သဲဖြူဖြူတွေမှာ လျှောက်ဖူးတယ်။ လျှောက်ရင်း လျှောက်ရင်း ဘူတာကြီးလမ်းဆုံ အ၀ိုင်းကိုကျော်ခဲ့ပြီ။ နဖူးမှာချွေးလေးစို့တော့ ကုန်တော်ကြီးဘုရား ကိုဖူးတွေ့ရတယ်။ မီး ရောင်အောက်က လက္ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အကြော်ဆရာကိုလဲ မြင်နေရတယ်။ မျက်စေ့တစ်ဆုံး အရှေ့ကို အနောက်ကို ရှေ့တူရှု ကို ကြည့်လို့ရနိုင်တဲ့ အကြော်ဆရာနဘေးကခုံမှာထိုင်လို့ ဝေးနေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကျောက်ပန်းတောင်းတခွက်နဲ့ အီကြာကွေး ပူပူလေး မှာလိုက်တယ်။
သူမရဲ့လမ်းတွေမှာ လမ်းလျှောက်သူ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ ရှိတယ်။ လမ်းထိပ်က မုန်ပြစ်သလက် မုန့်လင်မယား အကြော်စုံ ရောင်းတဲ့ အဒေါ်ကြီးလဲ မီးမွေးလို့နေတယ်။ အဝေးဆီမှ လွင့်ပြန့်လာတဲ့ အဆိုတော် မာမာအေးရဲ့ ဓမ္မတေးသီချင်း တွေ ကြားနေရတယ်။ တစ်ဆက်တည်း အာရုံဆွမ်းခံကြွလာတဲ့ ဆရာတော်များနဲ့ မောင်ကျောင်းသားရဲ့ ကြေးစည်သံကို ကြားရပြန်တယ်။ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်၊ တိုက်အုပ်ဆရာတော်၊ စာသင်သားဆရာတော်၊ ကိုရင်လေး စသည် တန်းစီလို့ ဖူးတွေ့ ရတယ်။ ကြည်နူးဖွယ်ရာ မြင်ကွင်းတခုပင်။ နောက်ဘ၀ဆက်တိုင်း ဆက်တိုင်းမှာ သူမ၏ရင်ခွင်မှ မခွဲမခွာ မကွဲမကွာ နေရပါလို၏ လို့ စိတ်ထဲ ကြိတ်ကာ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲမသိ။ ရောင်နီဦး အလင်းရောင်က အထပ်မြင့်အိမ်အမိုးများကို အရောင်ချယ်လို့ နေလေပြီ။ မြင်းလှည်းသံများ ပိုမိုကြားရသည်။ ဆက်ဘီး ဆိုင်ကယ် အလျိုလျို ဖြတ်သွားနေသည်။ ပြည်တွင်းဖြစ် ထော်လာဂျီ အသံက အိပ်ရေးကြီးသော သားသားမီးမီးတို့အား လှုပ်နိုးနေသလိုပင်ဖြစ်တော့သည်။ သို့နှင့် ကျွန်တော်လဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ပိုက်ဆံ ရှင်းပြီး ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအတိုင်း လွတ်လပ်ရေးဆီ ခြေဦးတည် လိုက်သည်။
DatE Saturday, January 16, 2010 LaveL kyaukpadaung0comments link this
မြန်မာ ning ဆိုဒ်များ
၁။ မြန်မာ ဘလော်ဂါ ဆိုဆိုဒ်တီ http://myanmarbloggersociety.ning.com
၂။ မြန်မာ အိုင်တီ လောက ဖွံ့ဖြိုးမှု http://problemclean.ning.com/
၃။ နည်းပညာတက္ကသိုလ် သူငယ်ချင်းများ http://gtuonlinefriends.ning.com/
၄။ မြန်မာ သူငယ်ချင်းများနေ့ http://friendsdaygroup.ning.com/
၅။ ရင်ခုံသံ သွေးလှူရှင်အသင်း http://yinkhonethan.ning.com/
၆။ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖွဲ့ http://mtbgroup.ning.com/
၇။ ကျောက်ပန်းတောင်းအသင်း http://kyaukpadaung.ning.com
၈။ မြန်မာမိသားစု http://myanmaractivecaringfamily.ning.com/
၉။ university of medicine (mandalay) http://ummstudent.ning.com/
၁၀။ youth knowledge devlopment http://knowledge-home.ning.com/
၁၁။ မြန်မာပြည်ကိုချစ်သာ သူငယ်ချင်းများ http://ummstudent.ning.com/
၁၂။ ဗဟုသုတ ဘဏ်တိုက် http://moelwin.ning.com/
၁၃။ ချောကလက်မြို့တော် www.chocolatemyotaw.ning.com
၁၄။ မြန်မာနက် မီဒီယာ http://myanmarnet.ning.com/
၁၅။ ကျွန်ုပ်၏ မီဒီယာ http://mediamm.ning.com/
၁၆။ ရွှေကျွန်းသား http://taryarpwagye.ning.com/
၁၇။ လိပ်ပြာ နန်းတော် http://butterflynantaw.ning.com/
၁၈။ ရေခဲ နန်းတော် http://icenantaw.ning.com
၁၉။ အိမ်သာနံရံ www.toiletwall.ning.com
၂၀။ မြန်မာ အိုင်တီ ကောင်းကင် http://myanmaritsky.ning.com/
၂၁။ မြန်မာ DJ ဖျော်ဖြေမှု http://myanmardjs.ning.com/
၂၂။ အီလက်ထရောနစ် ဂီတချစ်သူများ http://electronicamusiclovers.ning.com/
၂၃။ Myanmar Books Catalogue (NLS) http://myanmarbooks.ning.com/
၂၄၊ Myanmar narutofansite http://myanmarnarutofansite.ning.com/
၂၅၊ ကဗျာချစ်သူ http://poemchitthu.ning.com/
၂၆၊ နတ်တို့ပျော်စံရာ နတ်သဘင် http://www.natthabin.ning.com
၂၇၊ မြန်မာ မာတီ ရပ်ဝန်း http://myanmarmultiplyszone.ning.com/
၂၈၊ မြန်မာနည်းပညာ ရပ်ဝန်း http://technologymyanmar.ning.com/
၂၉။ မြန်မာ ကွန်ပျူတာ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း http://soeminntun.ning.com/
၃၀။ ကွန်ပျူတာ ကျောင်းတော်သားများ http://ucsycyber.ning.com/
၃၁။ မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးကွန်ယက် http://myanmartraditionalmedicine.ning.com
၃၂။ မြန်မာ့ ရာသီဥတုဆိုဒ် http://myanmarweather.ning.com
၃၃။ မြန်မာ ဗေဒင်ဆရာများ ကွန်ယက် http://myanmarastrologist.ning.com
နောက်ထပ် တိုးလာတဲ့ နည်းပညာ၊ စာပေ ဗဟုသုတ ning ဆိုဒ်များ သိပါက ကွန်မင့်ရေးပေးစေလိုပါသည်။
DatE Friday, January 15, 2010 LaveL စပ်မိစပ်ရာ0comments link this
မရေးပဲနေချင်ပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ တစ်နုံနုံနဲ့ ဖြစ်နေလို့ ရေးချလိုက်တယ်။
ဟိုး..ငယ်ငယ်က ထိုင်းနိုင်ငံကို (ဖာနိုင်ငံ) နှိမ့်ချ ပြောဆိုကြတာ မြန်မာလိူမျိုးတိုင်း အသိပါ။ ဆင်းရဲလို့ပဲလား ဘာကြောင့်ရယ် မတွေးမိပါဘူး။ လိင်ဖျော်ဖြေတဲ့ နိုင်ငံလို့ သိတာတခုတည်းနဲ့ စိတ်ထဲမှာ အထင် သေးမိတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံက ရှင်းရှင်းပြောရရင် လူသိရှင်ကြား ဖာအိမ်ထောင်ထားသူနဲ့တူပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ ထိုင်း နိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်လို့ အာရှမှ လူရာဝင်တဲ့ အနေထားမှာရှိပါတယ်။
စင်္ကာပူကိုရောက်စက ရွှေမြန်မာများ ပါးစပ်ဖျားမှာ (အလုပ်သမားအဖြစ်လာရောက်ကြသူများ) ဖားရိုက်မလား (ဖားရိုက်တယ်ဆိုတာ ဖိလစ်ပိုင် မိန်းမပျိုလေးများနှင့် ချိန်းတွေ့ ချစ်ကြိုက် လတ်တလောပြသနာ ဖြေရှင်းခြင်း)၊ အင်းဒိုနီးရှား မိန်းမပျိုလေးများကို ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိတော့ပါဘူး၊ အလုပ်လာလုပ်ကြသူ အချင်းချင်း အဆင် ပြေကြတာကို အပြစ်ပြောလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား မိန်ကလေးများ အိမ်ဖော် အလုပ်ဖြင့် လာတာများပါတယ်။ ပြောချင်တာက လူမျိုးရေး တစ်နိုင်ငံလုံး အရေးပေါ့။ လူ့စိတ် လွယ်လွယ်ရတော့ အလေးနက် မထားတတ်ပါဘူး။ အဲဒီကနေ နိုင်ငံကိုပါ အထင်သေးပါတယ်။ ဒါကလဲ သူ့နိုင်ငံက စီးပွားရေး အဆင်မပြေ ဆင်းရဲလို့ ဖြစ်မှာပါ။ သူများနိုင်ငံ အကြောင်း မကောင်းမပြောချင်ပါဘူး။ ယှဉ်ကြည့်ဖို့တော့ လိုတယ်။
အရင်က နားထဲမှာ ကြားနေရတာ အထက်ကပြောသလိုလေးတွေပေါ့ ဖားရိုက်မလား၊ ငါးနှိုက်မလား (အချောင်းဆိုး ပြောက်ဆေးလို့ပြောတယ် မူးယစ်ဆေးဝါးလိုသုံးတာ)။ အဲလိုနေရင်း နောက်ထပ် စကားတခွန်း ကြားလာရတယ် အဲဒါကတော့ ရွှေကျင်မလား တဲ့။ ရွှေကျင်တယ်ဆိုတာ မြန်မာ မိန်းကလေးများကို ချိန်ရွယ်ပြစ် တဲ့မျှားပါ။ ဒီဘက်နှစ်တွေမှာ မြန်မာ မိန်ကလေးတွေ အိမ်ဖော် အလုပ်နဲ့ လာတာများလာတယ်။ အဲလိုများလာ တာနဲ့အမျှ အဝေးမှာ နှစ်နဲ့ချီနေရတော့ လူပဲလေ သွေးနဲ့ကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်ပဲ . အဲတော့ ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ မြန်မာ ယောင်္ကျားလေးတွေ (သူ့လယ်ဘယ်နဲ့သူရှိပါတယ်) က ရွှေဆိုတဲ့ မြန်မာမလေးတွေကို ပြစ်မှတ်ထား လာကြတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီအထိ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ရွှေ အချင်းချင်း အဲလို ချစ်ကြိုက်ရာကနေ သံယောဇဉ်ဖြစ် ပြီး အိမ်ထောင်ရက်သား အတည်တကျ ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလေ။
အခုတစ်လော ရင်ထဲတစ်နုံနုံ နဲ့ ပေါက်ကွဲနေတာက ဘင်္ဂလား၊ အိန္ဒိယ ယောင်္ကျားလေးတွေ ကြားထဲမှာ မြန်မာ မိန်းကလေးများ အကြောင်း အတော်လေး ပြောနေကြတာ ကြားလာရတယ်။ အသားမဲလို၊ ကုလားမိုလို့ ဒေါသစိတ် နဲ့ မခံချင် ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး... အပြောခံရတာကလဲ ကြည့်ပါဦး.......
“မင်းဆို့ မြန်မာ မိန်းကလေးတွေ ဖိလစ်ပင်း စိမ်းစိမ်း” တဲ့ ကြားကြားချင်း ထသတ်ချင်စိတ် ပေါက်တယ်။
အစကတော့ မြန်မာ အိမ်ဖေါ်မလေးတွေကို အပြစ်တင်ချင်တယ်။ နောက်ပီး သောက်လုပ် မလုပ်ပဲ အိပ်ထောင် ဦးစီးလုပ် မကျွေးနိုင်ပဲ ကလေးတွေမွေးတဲ့ မြန်မာယောင်္ကျားတွေကို အပြစ်တင်ချင်တယ်။ သေချာတွေးတော
ဒါတွေဖြစ်တာ ဘာကြောင့်လဲ ရှင်းပါတယ်။ စီးပွားရေး အဆင်မပြေလို့ဖြစ်တာ။ စားစရာ မရှိတဲ့ ဘ၀ကို ဘယ်လို ကိုယ်ကျင့်တရားက တောင့်ခံနိုင်မှာမို့လဲ။ အောက်ခြေ လူထု ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ သူတို့တွေ သိသင့် တယ်။ ဖိလစ်ပင်းလို အင်ဒိုနီးရှားလို ဆင်းရဲလို့ ဒီလို အပြောခံရတာ ဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ ကြာရင် ဒီထက်ဆိုး လာလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်ကြောင့်ဆိုရင် ခြေမ မကောင်းခြေမ၊ လက်မ မကောင်း လက်မပေါ့။ ဖြတ်ထုတ်ပစ်လို့ရတယ်။ အခုဟာက တစ်မျိုးသားလုံးနဲဆိုင်တယ်။ တော်တော်ရင်လေးမိတယ်။
အဲဒီတော့ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ။ ဒီအခြေနေတွေကို မရောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
DatE Saturday, January 09, 2010 LaveL စပ်မိစပ်ရာ0comments link this
ပင်စီ ရိုးတံ ချည့်နဲ့ နေပါစေ
စံပယ်ဖြူကို ချစ်တဲ့ ဥယျာဉ်မှူး ရှိတယ်။
နေရောင်ချည်နဲ့တူတဲ့ ဥယျာဉ်မှူး ရှိတယ်။
ဥယျာဉ်မှူး ရင်ခွင်မှာ အေးမြစေမယ်။
စိတ်ဆိုတဲ့ စိတ္တဇနာမ်ကို မထိစေနဲ့
သက်ရှိအားလုံး အပေါ်မှာ မေတ္တာထား။
စံပယ်ဖြူ ပွင့်တိုင်း မွှေးစေသား။
DatE Saturday, January 09, 2010 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
ကမ္ဘာမြေ စိမ်းလန်းပါစေ၊ မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းပါစေ။
ကမ္ဘာ့လူသားတို့ ကမ္ဘာမြေ စိမ်းလန်းစေဖို့ တောင်းဆုတွေနဲ့ ၂၀၁၀ ကိုခြေချတယ်။
မြန်မာ့ပြည်သားတို့ မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းစေဖို့ တောင်းဆုတွေနဲ့ ၂၀၁၀ ကိုခြေချတယ်။
ငါသည် ကမ္ဘာ့လူသား မြန်မာ့ပြည်သား ....... ထို့ကြောင့် ငါ့ဆုတောင်း၏
DatE Friday, January 01, 2010 LaveL New year 20100comments link this